Ifolda ekhuselekileyo yeSamsung ngoku inokukhutshelwa kwiVenkile yokuDlala | I-Androidsis
UElvis bucatariu | | Ukusetyenziswa kwe-Android
Kwangoko kule nyanga, i-Samsung yathatha isigqibo sokuyikhupha khu seleko I-Knox yam ivela kuluhlu lwakho lweGalaxy izixhobo eziselfowuni.
Iqhina lam Yayiluhlobo lwesicelo se- "sandbox" esivumela abasebenzisi ukuba basebenzise iselfowuni efanayo emsebenzini nakwezolonwabo. Ngale ndlela, abasebenzisi banethuba lokwenza njalo thintela ukusetyenziswa kwezicelo ezithile ngeKnox ngelixa besemsebenzini, ngelixa ekhaya izicelo ezinjalo ziya kuthintelwa ngokupheleleyo, oko kuthintela ukusetyenziswa kwazo ngabantu besithathu.
Nangona i-Knox yam ingasafumaneki kwiifowuni ezintsha ze-Samsung, abo baneqonga elifakelweyo kwiitheminali zabo baya kuba nakho ukulisebenzisa ukusukela ngoku ukuya esiphelweni somhla wokuxhaswa, de kube kungaziwa okwangoku.
Ukongeza, i-Samsung icebise ukuba endaweni ye-My Knox, abasebenzisi baya kuba nakho ukuqala ukusebenzisa i Isiqulathi seefayili esikhuselekileyo, isicelo esenza indawo yabucala kunye nekhodi nakweyiphi na i-Samsung Galaxy mobile.
Ekuqaleni yayifumaneka kwiGlass Qaphela 7, Ifolda ekhuselekileyo inokufumaneka kuphela kwiGlass App Store, kodwa ngoku bonke abasebenzisi beSamsung bazokwazi ukuyikhuphela ngqo kwiVenkile yeGoogle Play.
Ngendlela efanayo kwiKnox yam, iFolder Safe app isebenzisa uluvo lwe "sandbox" Ukwahlula ezona zicelo zibalulekileyo kwizicelo ezijolise kwezolonwabo ukuze unikeze abasebenzisi ukhuseleko olongezelelekileyo.
Ukusetyenziswa kunye nedatha kunokukhuseleka ngokulula ngokunqakraza kukhetho "Hambisa kwifolda ekhuselekileyo”. Iifayile zingeniswa ngaphakathi ngokunqakraza ngokuthe ngqo kukhetho "Yongeza iifayile”Ngaphakathi kwisixhobo seFolder Secure. Kwelinye icala, isixhobo esitsha siya kuthintela iiapps kunye neefayile ngeendlela ezahlukeneyo, nokuba kungokutshixwa kwebhayometrikhi, iphethini, iphasiwedi okanye ikhowudi yePIN, kukhetho lomsebenzisi ngamnye.
Nangona ifolda ekhuselekileyo ikwiVenkile yokuDlala, gcinani engqondweni ukuba usetyenziso Kukhawulelwe ukukhetha izixhobo kuluhlu lweGalaxy kuphela.
Khuphela ifolda ekhuselekileyo yeSamsung kwiVenkile yokudlala
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ifolda ekhuselekileyo yeSamsung ngoku inokukhutshelwa kwiVenkile yokudlala
Ndine Sony Xperia Z5 kwaye ithi le nto ayihambelani nefowuni yam
Isilawuli esiKhuselekileyo sikaSamsung sisebenza kuphela kwiimodeli zoluhlu lweenkampani, njengoko kuchaziwe kwinqaku.
NdineSony Xperia Z5 eqhelekileyo kwaye kwiVenkile yokudlala indixelela ukuba "Isixhobo sakho asihambelani nale nguqulo"
molo ndinomnyele we-s4 5.0.1 kwaye ithi ayihambelani
UJose Quintana sitsho
Andikwazi ukufaka esi sicelo kwi-Samsung A11 yam
Phendula kuJose Quintana
Indaba ezimbi! I-OnePlus 2 ayiyi kufumana uhlaziyo kwi-Android Nougat